Penguuin Isle bụ ahụmahụ pụrụ iche a ga - ebi na ekwentị gị | Gam akporosis
Zụlite penguins gị ma mepụta ebe obibi ha na nnukwu agwaetiti Penguin
Penguin Isle bụ ihe eji egwu egwu ọhụrụ nke na-akpọrọ anyị gaa izu ike kachasị mma nke bụ ka ịhụ ọnụọgụ dị mma nke penguins na-eto. A aha dị ka ndị ọzọ na-ewe anyị na Nzuzo nke icebergs nke ga-abụ "ụlọ" maka penguins anyị.
A free aha na ihe magburu onwe oru na visual larịị. Eziokwu bụ na ọ bụ ihe ọ toụ inwe ike ịhụ etu penguins si agagharị site na icebergs yana otu anyị si emeziwanye "ụlọ ọrụ" ha ka ha wee gbutekwuo azụ, wuo ihe owuwu ma jide nnukwu ice ha.
1 Arctic dị n'ọbụ aka gị
2 Ọ bụrụ na ị na-achọ udo, lekọta penguins….
3 Penguin Isle dị ka nnukwu nnukwu nkịtị
Arctic dị n'ọbụ aka gị
Ọ bụrụ na enwere ihe na-eweta afọ ojuju dị ukwuu, ọ nwere ohere lee ezinụlọ nke penguins na-agagharị na iceberg nke ha bi ka a ga-asị na ọ bụ ụlọ ha. Site na egwu dị jụụ na ihe ngosi ọhụụ mara mma, Penguin Isle bụ egwuregwu dị ka ọ bụla ọzọ na nke ahụ na-ewere gị gabiga ahụmahụ dị iche.
Will ga-elekọtara iweta penguins ọzọ na agwaetiti ahụ ma nye ha ọrụ iji nweta ego ma si otú a nwee ike ịzụrụ ezinụlọ ahụ dum. Anyị na-ekwu maka ya a Clicker ma ọ bụ na-abaghị uru egwuregwu nke anyị ga-etinye ihe niile anyị na-emepụta ma si otú ahụ na-eto obere iceberg n'ime nke buru ibu na ọtụtụ ezinụlọ nke penguins.
Penguin Isle bụ egwuregwu zuru ezu nke anyị nwere ike iju anya mgbe anyị kụrụ whale na mberede, na ihe ịtụnanya anyị, site na omimi a nnukwu apụta na-enye anyị nnukwu uru. Ọ bụ ụdị nkọwa ndị a nwere ike ịmịpụta ahụmịhe pụrụ iche na ọ bụ ha na-amasị ha.
Ọ bụrụ na ị na-achọ udo, lekọta penguins….
Yabụ na anyị nwere ike ịse foto ọhụụ ọhụụ ọhụụ batara na aisbeg, tinyekwara nke ahụ lekọta azu ma ọ bụ rara onwe ha nye ugbo. Dị ka egwuregwu ndị ọzọ na-abaghị uru, anyị nwere ike ịlele mmegharị nke ọ bụla ma ọ bụ mee ka ụlọ ọrụ ha ka mma.
Ọ na-aga n'ekwughị na egwuregwu ahụ dị mfe ma anyị ga-enwe ike ịmepụta ọtụtụ penguins ngwa ngwa iji nweta ego zuru ezu maka ebe obibi ọhụrụ. Anyị ga-aka mma penguins nakwa na ha ga-enwe ike ịwekwu ego ka ha wee baa ọgaranya n’ụwa oyi ebe ego anaghị adị mkpa.
Ihe a nile na ntinye nke bu na inwere ike megharia igwefoto iji nweta uzo kacha mma nke penguins gị wee si otú a na-akasi gị obi site na iji ihe oyiyi dị jụụ ma na-atụrụ ndụ enwere ike ịnweta site na ịme egwuregwu a. Eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na Penguin Isle.
Penguin Isle dị ka nnukwu nnukwu nkịtị
Ihe anyị hapụrụ na mmetụta nke ahụanyị na-egwu egwuregwu pụrụ iche nakwa na anyị anaghị ada mbà na freemium. Nke ahụ bụ, n'ime obere oge ị ga - enwe ike nweta onwe gị ọtụtụ akụrụngwa, ọtụtụ penguins na ego zuru ezu iji mụta otu esi etinye ya na ndozi ndị ahụ ịchọrọ. Anyị na-atụ aro ka ị ghara ida akwa whale na-apụta site na omimi, ebe ọ bụ ihe ngosi n'onwe ya.
Egwuregwu pụrụ iche na nke ahụ na-anọpụ iche n'ụzọ ọhụụ. A na-eme ihe niile dị n'egwuregwu a ka ọ bụrụ ihe ụtọ anya maka anya anyị. Dị ka ihe nkiri nke anụmanụ arctic (enwere ya karịa whale na penguins) na nsonaazụ ndị ahụ na-eme na ihuenyo mgbe anyị mikpuru igwefoto ma chọọ ịhụ karịa elu. Egwuregwu nke pụtara n'onwe ya na nke na-egosi na enwere ọtụtụ ihe ịme egwuregwu.
Penguin Isle bụ ahụmịhe pụrụ iche maka ekwentị mkpanaaka gị nakwa na ị nwere ya n'efu na Playlọ Ahịa Google. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị dajụọ mgbe egwuregwu ole na ole gasịrị na PUBG Mobile, ọ na-ewelarị oge ịwụnye ma nwalee ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ egwuregwu ọzọ na-abaghị uru nke kachasị achọ ịmata ihe, Nkwupụta ọchịchị 3K.
Onye edemede: 82%
Onye edemede: 81%
Anya na teknuzu kacha mma
Jide na ịme anwansị
Ihe eserese na eserese, ọkachasị nke whale na-apụta site na omimi.
Ọ chọrọ ezigbo ọnụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Zụlite penguins gị ma mepụta ebe obibi ha na nnukwu agwaetiti Penguin
Jaime Melgar kwuru dijo
Ndi penguins na North osisi?
Lee ihe mgbu ị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ị ga-ebi!
Zaghachi Jaime Melgar
Otu nke gafere dijo
O doro anya na agụmakwụkwọ gị kacha mma. Daalụ
Ama m, olee ebe igbe dị?
Daalụ maka mgbazi ahụ. M dezie isiokwu.
Ma mba, enwere m ezigbo ihu ọma na nkuzi m nwere.
Ihe ọzọ bụ na ị na-emehie ihe. Ekele na ekele!
Ndewo ọma, egwuregwu dị mma, zuru ike nke ukwuu, daalụ nke ukwuu!
Mana enwerem ajuju, kedu ka esi eji oge? Enweghị m ike ịga n'ihu nyocha ihe ọhụrụ ebe ọ gwara m ka m mee "ozi" ahụ. Daalụ!
Site na ihe m nwere ike ịghọta na ọ bụ "oge Token" ma enwere ike nweta ya na 30 ịzụrụ ọnụ.
Achọtara "oge akara aka" na ngwụcha nke ụlọ ahịa ahụ ma enwere ike zụta ya elekere 1.
Ọ bụrụ na idozi ya n'ụzọ dị otu a, biko kwuo okwu!
M mere ya dị ka nke a, ọ rụọ ọrụ zuru oke maka m. I meela nke ukwuu, ajuju ajujuru ajuju ajuju ajujujuro m, mu na ndi ozi a rachigidere anya ruo ubochi ato ...
Ekele na ekele maka post.
Enwere m obi abụọ dị ka Xabi, olee otu esi eji mpempe oge?
Lee anya azịza m nyere xabi
Ahuru m na otutu anyi nwere otu obi abua banyere ebe obi ahu di. Ọ bụrụ na mmadụ edozila ya, mee ka ha mara
Olee otu m ga-esi mezue ọrụ ahụ… Mepee akpa 1 (s)
Ayudaaaa, penguins m wetaara m azu azu ohia, gini ka o bu? Ka ọ bụ naanị maka ire ere? Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na mmadụ aza m
Ndewo, ị ma ọ bụrụ na m hichapụ ngwa a, a naghị ehichapụ ọganihu ahụ?
Ọ na-enyere aka, anaghị m aghọta ụdị ego. Enwebeghị m ike ịmepụta ntọala Antarctic, kedu ka esi eme ya? Need chọrọ otu n'ime ihe ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ gịnị? Amaghị m otu esi abịaru ego nso, ana m egwu ma kpọọ ihe ọ bụla. Nyere biko: (((
Realme 3 Pro na-enweta ngwanrọ ngwanrọ ọhụrụ na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ
Tinye na ekweisi gị ma zuru ike na Music Zen, ngwa anaghị akwụ ụgwọ iji belata nrụgide kwa ụbọchị